Banijya News | » चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले मंसिर १७ गतेदेखि आईपीओ विक्री गर्ने, कस कसले दिन सक्छन् आवेदन ? चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले मंसिर १७ गतेदेखि आईपीओ विक्री गर्ने, कस कसले दिन सक्छन् आवेदन ? – Banijya News
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले मंसिर १७ गतेदेखि आईपीओ विक्री गर्ने, कस कसले दिन सक्छन् आवेदन ?
चन्द्रागिरी केबलकारको सञ्चालक कम्पनी चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले मंसिर १७ गतेदेखि आईपीओ विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि ३ लाख ६ हजार ८१९ कित्ता शेयर विक्री खुला गर्न लागेको हो ।
चन्द्रागिरी हिल्सले १ सय अंकित मूल्यमा ३० करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । उक्त आईपिओमा छिटोमा पुस १ गतेसम्म र ढिलोमा पुस १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
कम्पनीले स्थानीयलाई आइपीओ निष्काशन गरेपछि सर्बसाधारणको लागि आईपिओ निष्काशन गर्ने छ ।पहिलो चरणमा स्थानियका लागि २ प्रतिशत सेयर जारी गर्न लागेको हो । दोस्रो चरणमा १० प्रतिशत दरको कम्पनीको कर्मचारी समेत गरी १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता सेयर अन्य सर्वसाधारणमा जारी हुनेछ ।